Manampy Hianatra ny Fahamarinana ny Fampifanoheran-kevitra | Fianarana
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Septambra 2013
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mahasoa Anao Ireo Hevitra Ampifanoherina
Azo inoana fa ekenao hoe i Jesosy no Mpampianatra nahay indrindra teto an-tany. Efa miezaka manahaka azy angamba ianao, ka mampiasa fanontaniana sy fanoharana rehefa mampianatra. Fantatrao ve anefa fa nampifanohitra hevitra koa izy?
Maro ny olona mampifanohitra hevitra rehefa miresaka. Mandeha ho azy izany matetika fa tsy eritreretina. Mety hilaza, ohatra, ianao hoe: “Lazainy fa masaka daholo ireo voankazo, nefa mbola manta be ireto.” Na koa hoe: “Saro-kenatra be io ankizivavy io taloha, nefa lasa maresaka be izy izao.”
Mampifanohitra hevitra ianao rehefa milaza hevitra na zava-misy ary avy eo milaza hevitra mifanohitra amin’iny, ka mampiasa mpampitohy toy ny hoe nefa, fa, anefa, na kosa. Tsy hafahafa ny mandre an’izany, sady manampy ny olona hahazo izay tianao holazaina.
Ilaina ny mampifanohitra hevitra, na dia tsy mahazatra aza izany amin’ny kolontsaina sy fiteny sasany. Nahoana? Satria misy fampifanoheran-kevitra maro ao amin’ny Baiboly. Nampiasa azy ireny matetika i Jesosy. Tsaroanao ve, ohatra, ireto? “Rehefa mandrehitra jiro ny olona, dia tsy mametraka azy ao ambany sobika famarana fa eo amin’ny fitoeran-jiro.” “Tsy tonga hanafoana [ny Lalàna] aho, fa hanatanteraka.” “Efa renareo fa voalaza hoe: ‘Aza manitsakitsa-bady.’ Izaho kosa anefa milaza aminareo fa izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy...” “Voalaza hoe: ‘Maso ho solon’ny maso ary nify ho solon’ny nify.’ Izaho kosa anefa milaza aminareo hoe: Aza manohitra an’izay manisy ratsy anao, fa na iza na iza mamely tehamaina ny takolakao havanana, dia atodiho any aminy koa ny takolakao ilany.”—Mat. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39.
Misy fampifanoheran-kevitra koa any amin’ny boky hafa ao amin’ny Baiboly. Manampy anao hahatakatra hevitra izy ireny, na manasongadina fomba tsara kokoa anaovana zavatra iray. Diniho, ohatra, ity raha manan-janaka ianao: “Ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao hatrany araka ny fananarana sy ny fomba fisainan’i Jehovah izy.” (Efes. 6:4) Afaka nilaza fotsiny ny apostoly Paoly hoe tokony hitaiza ny zanany araka ny fomba fisainan’i Jehovah ny ray (na ny reny). Efa marina izany sady torohevitra feno fahendrena. Vao mainka mazava anefa ny tiany holazaina rehefa nampifanohitra hevitra izy, ka niteny hoe: ‘Aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao hatrany araka ny fomba fisainan’i Jehovah izy.’
Hoy koa i Paoly: ‘Isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-dra, fa amin’ireo fanahy ratsy any amin’ny faritry ny lanitra.’ (Efes. 6:12) Takatrao avy amin’io fampifanoheran-kevitra io fa ady mafy tokoa no tsy maintsy ataonao. Tsy ady atao amin’olona ilay izy, fa amin’ny fanahy ratsy.
Mbola maro ny fampifanoheran-kevitra nolazain’i Paoly ao amin’ny Efesianina. Ho azontsika izay tiany holazaina rehefa misaintsaina azy ireny isika, ary hazava kokoa amintsika izay tokony hatao.
Mety hahafinaritra anao sy hahasoa anao ny mandinika ny pejy faha-4 sy faha-5. Hita ao ny sasany amin’ireo hevitra ampifanoherina ao amin’ny Efesianina 4, 5. Saintsaino izao rehefa mamaky azy ireo ianao: ‘Manao ahoana marina ny toetrako sy ny fisainako? Ahoana no ataoko amin’ny toe-javatra hoatran’io na mitovitovy amin’io? Iza amin’ireo hevitra roa mifanohitra ireo no mety holazain’ny olona fa mahalaza ny momba ahy?’ Miezaha hiova raha misy zavatra hitanao hoe mila ahitsinao. Handray soa avy amin’ilay fampifanoheran-kevitra ianao, raha manao izany.
Azo ampiasaina amin’ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana koa ireo pejy ireo. Azo atao, ohatra, izao: Samy mamaky an’ireo fampifanoheran-kevitra aloha ny rehetra. Avy eo ny iray milaza ny tapany voalohany, ary ny hafa miezaka mitadidy ny hevitra asongadin’ilay tapany faharoa. Mety samy hilaza ny fomba ampiharana tsara kokoa an’ilay tapany faharoa ny rehetra, aorian’izay, ka hahafinaritra erỳ ilay dinidinika. Mety hanampy ny kely sy ny lehibe ny fandinihana an’ireny fampifanoheran-kevitra ireny, ka ho tsara fitondran-tena foana izy ireo, na ao an-tokantrano na any an-toeran-kafa.
Tohizo hoe ny tapany faharoa amin’ilay izy!
Mety ho mora kokoa aminao ny hahita ireo fampifanoheran-kevitra ao amin’ny Baiboly, rehefa tsapanao fa tena ilaina izy ireny. Mety ho hitanao koa hoe tena tsara ny mampiasa azy ireny rehefa manompo. Afaka milaza toy izao, ohatra, ianao rehefa mitory: “Maro no milaza fa manana fanahy tsy mety maty ny olona, nefa mariho izay lazain’ny Tenin’Andriamanitra.” Afaka milaza toy izao koa ianao rehefa mampianatra: “Mino ny ankamaroan’ny olona hoe iray ihany Andriamanitra sy Jesosy. Inona anefa no lazain’ny Baiboly? Ary ahoana ny hevitrao?”
Maro ny fampifanoheran-kevitra andraisana lesona ao amin’ny Soratra Masina. Afaka manampy antsika hanao ny sitrapon’Andriamanitra izy ireny. Afaka mampiasa azy ireny koa isika mba hanampiana ny olona hahalala ny fahamarinana.
Fampifanoheran-kevitra Vitsivitsy (Efesianina 4, 5)
Ampiasao amin’ny fotoam-pivavahanareo ireto pejy ireto
‘Tsy [tokony] havezivezin’ny famitahan’ny olona intsony isika, amin’ny alalan’ny hafetsen-dratsy amin’ny famoronana hevi-diso.’——4:14.
“Milaza ny marina kosa isika, ka aoka hitombo amin’ny zava-drehetra amin’ny alalan’ny fitiavana mba hifanaraka amin’ny loha, dia i Kristy.”—4:15.
‘Maizin-tsaina [izao tontolo izao] noho ny hamafin’ny fony.’—4:18, 19.
“Tsy mba toy izany kosa no nianaranareo momba an’i Kristy, raha toa ka izy tokoa no renareo ary tamin’ny alalany no nampianarana anareo.”—4:20, 21.
‘Esory ny toetranareo taloha, izay mifanaraka amin’ny fitondran-tenanareo fahiny.’—4:22.
“Fa mba hohavaozina hatrany kosa ianareo eo amin’ny hery mibaiko ny sainareo, ka mba hitafy ny toetra vaovao.”—4:23, 24.
“Aoka ny mpangalatra tsy hangalatra intsony.”—4:28
“Fa aoka kosa izy hiasa mafy, ka hampiasa ny tanany hanaovana asa tsara.”—4:28
“Aoka tsy hisy teny ratsy hivoaka amin’ny vavanareo.”—4:29.
“Fa izay teny tsara ho fampaherezana kosa.”—4:29.
“Aoka hesorina tsy ho eo aminareo ny lolompo rehetra, ny fahatezerana rehetra, ny fahavinirana rehetra, ny filelalelana rehetra ary ny fanevatevana rehetra, mbamin’ny faharatsiana rehetra.”—4:31.
“Aoka kosa ianareo ho tsara fanahy amin’ny namanareo avy, ka hangoraka sy hifamela heloka tanteraka.”—4:32.
“Aoka tsy hotononina eo aminareo akory izay resaka momba ny fijangajangana sy izay rehetra mety ho fahalotoana na izay faniriana tsy mety afa-po.”—5:3.
“Fa aleo kosa manao teny fisaorana.”—5:4.
‘Tao amin’ny haizina ianareo teo aloha.’—5:8.
“Fa ao amin’ny hazavana kosa ankehitriny, noho ianareo tafaray amin’ny Tompo.”—5:8.
“Aza miaraka amin’izy ireny intsony amin’ny fanaovana ny asan’ny haizina.”—5:11.
“Fa aleo kosa tsy mankasitraka izany.”—5:11.
“Koa mitandrema tsara hatrany mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala.”—5:15.
“Fa tahaka ny hendry, ka hararaoty tsara ny fotoana.”—5:15, 16.
“Koa aza miadaladala intsony.”—5:17.
“Fa fantaro hatrany izay sitrapon’i Jehovah.”—5:17.
“Aza mba mamon-divay, fa mitarika ho amin’ny filibana izany.”—5:18.
“Fa aoka kosa ianareo ho feno fanahy masina hatrany.”—5:18.
“Izany dia mba [hanoloran’i Kristy] azy io ho an’ny tenany ihany ho fiangonana ao anatin’ny famirapiratany, sy tsy misy pentina na ketrona na zavatra toy izany.”—5:27.
“Fa mba ho fiangonana masina sy tsy misy tsiny kosa.”—5:27.
“Tsy misy olona mankahala ny nofony.”—5:29.
“Fa mamelona azy io kosa sy maneho fitiavana azy, tahaka ny ataon’i Kristy amin’ny fiangonana.”—5:29.
Hizara Hizara Mahasoa Anao Ireo Hevitra Ampifanoherina
Azo Itokisana ny Fampahatsiahivan’i Jehovah
Mahafaly ny Fonao ve ny Fampahatsiahivan’i Jehovah?
Efa Niova ve Ianao?
Ahoana no Hahaizanao Manapa-kevitra?
Manampy Antsika ho Akaiky Kokoa An’i Jehovah ny Asan’​ny Mpisava Lalana
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2013
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2013
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2013